Izay mirehareha miteny sy ny Voninahitr'Andriamanitra
Introduction I love kids. Iray amin'ireo antony tiako ankizy dia satria mampiseho antsika ny tenantsika. Ry zareo toy ny fitaratra kely. Mamelà ahy hilaza aminareo ny zavatra tiako holazaina. Kids have pretty much all of the...
Ny fomba mamaly ny hafatra dia miankina amin'ny hoe iza izany avy. Mamelà ahy ianareo hanome ohatra anareo. Raha misy olon-kafa mandeha miakatra atỳ amiko eny an-dalana ary milaza, “Let me borrow...
Naorina To mirehareha Pt. 2
Air Jordana no malaza. Tsy hanao azy mafy mihalehibe aza, satria ny ray aman-dreniko ahy tsy nety hividy kiraro lafo vidy ridiculously. Tsy tiako izany, but I knew I would never get...
This video and manuscript is from Trip’s General Session at the Legacy Conference 2013. Introduction The theme of this conference is Soli Deo Gloria, na ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Izany no foto-kevitra lehibe. And...
Tsy misy olona tia ny anarany droppers. Fantatrareo izay aho miresaka momba ny. Ireo olona izay te ho fantatrareo fa fantany ny olona fa mety te-hahafantatra. Rehefa mieritreritra aho "namedropper,” there’s one...
Foana aho miakatra amin'ny Trayvon Martin Iny resabe iny dia hatrany am-piandohana. Toy ny maro aminareo, dia nijery ny vaovao mikasika ny, vakio ny lahatsoratra, dia niresaka momba izany amin'ny namana. It dominated public conversation...